हाम्रो छाती र लिलामको बहादुरे – anbika giri
हाम्रो छाती र लिलामको बहादुरे
कथा यत्ति हो, जगदीश घिमिरेको चर्चित उपन्यास ´लिलाम´ को! सरूभक्तको ´पागलवस्तीको जस्तो कथा हुँदै नभएको बस्तीको होइन । त्यसैले पाठक आख्यानकारको कल्पना भनेर तर्किन सक्दैन । हामीले बहादुरेलाई हाम्रो गाउँमा भेटेका छौं, सहरमा पनि भेटेका हुन्छौं । ऊ सहरमा अलि भिन्न रूपमा छ, केही न केही लिलाम गर्दै वा उसको केही न केही लिलाम हुँदै गरेको हुन्छ । फरक यत्ति छ, त्यतिबेला बहादुरे सामन्तवादको चपेटामा परेको थियो । अहिले बहादुरेलाई पुँजीवादले लिलामको संघारमा तानेको छ । पेटभरी खान नपाएको बहादुरेका हात आफूतिर पुँजीवादलाई तान्न सक्ने जति दह्रा छैनन्। उसकी छोरी यतिबेला काठमाडौंमा यौनकर्मी हुन्थी होली। स्वास्नी पनि आफूलाई बिकुन्जेल बेच्थी होली । बहादुरे के गर्थ्यो होला? देशमा उद्योग बिनाको दलाल पुँजीवाद छ, बहादुरेको भुमिका निःसन्देह दलालको हुन्थ्यो होला! छोरी र स्वास्नीको लागि स्वयं ग्राहक खोज्थ्यो होला ।
Author AnbikaPosted on March 26, 2012 March 26, 2012 Categories Random thoughsTags Nationality, NepaliPolitics
One thought on “हाम्रो छाती र लिलामको बहादुरे”
LIla bahadur basnet says:
là¤²à¥‡à¤– à¤¨à¤¿à¤•à¥ˆ à¤®à¤¨ à¤›à¥à¤¨à¥‡ à¤› à¥¤ à¤¬à¤¸à¤¾à¤ˆ , à¤²à¤¿à¤²à¤¾à¤® , à¤…à¤¬à¤¿à¤°à¤² à¤¬à¤—à¥à¤¦à¤› à¤‡à¤¨à¥à¤¦à¥à¤°à¤¾à¤µà¤¤à¤¿ à¤œà¤¸à¥à¤¤à¤¾ à¤‰à¤ªà¤¨à¥à¤¯à¤¾à¤¸à¤²à¥‡ à¤ªà¤¾à¤ à¤•à¤•à¥‹ à¤®à¤¨à¤®à¤¾ à¤¯à¤¸à¥à¤¤à¥ˆ à¤ªà¥à¤°à¤­à¤¾à¤µ à¤ªà¤°à¥à¤› ! à¤…à¤¨à¤¿ à¤²à¤¾à¤—à¥à¤› à¥¨à¥¦ – à¥©à¥¦ à¤•à¥‹ à¤¦à¤¸à¤•à¤®à¤¾ à¤²à¥‡à¤–à¤¿à¤à¤•à¤¾ à¤‰à¤ªà¤¨à¥à¤¯à¤¾à¤¸à¤¹à¤°à¥à¤®à¤¾ à¤†à¤œà¤•à¥‹ à¤¸à¤®à¤¾à¤œ ‘à¤«à¤¿à¤Ÿ’ à¤¹à¥à¤¨à¥ à¤­à¤¨à¥‡à¤•à¥‹ à¤¬à¤¿à¤¡à¤®à¥à¤¬à¤¨à¤¾ à¤¹à¥‹ ! à¤²à¥‡à¤– à¤®à¤¨ à¤ªà¤°à¥â€à¤¯à¥‹ !à¤…à¤à¥ˆ à¤ªà¤¢à¥à¤¨ à¤ªà¤¾à¤ˆà¤¯à¥‹à¤¸ !